China Metal Conduit Miaraka amin'ny orinasa PU Sheathing sy mpanamboatra | Weyer
Fantsona metaly miaraka amin'ny sheathing pu
Ny fantsom-by vita amin'ny plastika vita amin'ny plastika dia vita amin'ny fantsom-by vy sy fantsom-by vita amin'ny vy, nopetahany sosona fitaovana PU teny anelanelan'ny tampon'ny rindrin'ny fantsona. Noho ny tombon-tsoa entin'ny lanja maivana, ny fahafaha-manao tsara, ny tanjaky ny fifandraisana amin'ny kojakoja, ny fahombiazan'ny herinaratra, ny fanoherana ny solika, ny fanoherana rano sns, ny fantsom-by vita amin'ny plastika dia be mpampiasa amin'ny hery, simika, metallurgy, indostrian'ny hazavana, milina ary indostria hafa.
Fampidirana ny làlam-by miaraka amin'ny sheathing pu
Ny fantsom-by vita amin'ny plastika vita amin'ny plastika dia vita amin'ny fantsom-by vy sy fantsom-by vita amin'ny vy, nopetahany sosona fitaovana PU teny anelanelan'ny tampon'ny rindrin'ny fantsona. Noho ny tombon-tsoa entin'ny lanja maivana, ny fahafaha-manao tsara, ny tanjaky ny fifandraisana amin'ny kojakoja, ny fahombiazan'ny herinaratra, ny fanoherana ny solika, ny fanoherana rano sns, ny fantsom-by vita amin'ny plastika dia be mpampiasa amin'ny hery, simika, metallurgy, indostrian'ny hazavana, milina ary indostria hafa. Ny famaritana dia avy amin'ny 6mm ka hatramin'ny 200mm, ary ny loko mainty na volondavenona. Ny famaritana manokana sy ny loko dia azo namboarina.
Structure JS & TPU
Properties Malalaka sy mora mivondrona sy menaka, tsy misy halogen, phosfor ary cadmium,nandalo RoHS
Degre fiarovana IP68
Temperature Range Min -40 ℃, Max 100 ℃, fotoana fohy 120 ℃
Color Gray, mainty
Lelafo-retardant V0 (UL94)
Andininy No. Andininy No. Andininy No. Atiny anaty Min anaty ivelany Fonosana
Gray Black Blue MG MG MG vondrona
JSH-Pu-10G JSH-Pu-10b JSH-PU-10 BU φ10 10 14,5 50
JSH-Pu-12G JSH-Pu-12b JSH-PU-12 BU φ12 12.5 16,8 50
JSH-Pu-15G JSH-Pu-15b JSH-PU-15 BU φ15 15.5 20,2 50
JSH-Pu-25G JSH-Pu-25b JSH-PU-25 BU φ25 25 30,7 50
JSH-Pu-32G JSH-Pu-32B JSH-PU-32 BU φ32 32 38,6 25
JSH-Pu-38G JSH-Pu-38B JSH-PU-38 BU φ38 38 44,6 25
Tombontsoa azo avy amin'ny fantson-by vy
1. Ny fantsom-by vita amin'ny plastika dia manana fahaleovan-tena tsara, fanoherana ny harafesina, fanoherana ny hafanana avo lenta, fanoherana fanoherana, fanoherana mahery vaika, ary manome fahombiazana miaro elektromagnetika tena tsara.
2. Azo aforitra malalaka amin'ny zoro isan-karazany sy ny taratra fihodinana, ary manana fahaleovan-tena sy faharetana mitovy amin'ny lalana rehetra.
3. Ny fantsom-by vy vita amin'ny plastika dia miovaova eo anelanelan'ny pitch tsirairay, afaka manovaova tsara, ary tsy misakana na mafy.
4. Hisy tanjaka matanjaka eo anelanelan'ny fehin-kibon'ny fantsom-by vita amin'ny plastika, izay afaka misoroka ny fahasimban'ny fantsona ary mahatonga ny tsipika napetraka ao anaty fantsona hivoaka.
5. Ny firafitry ny fantsona mifono plastika dia karazana buckle tokana sy roa-buckle, izay mampitombo ny tanjaka mihombo ary tsy mora vaky na simbaina.
6. Ny fantsona mifono plastika dia manana fampisehoana miondrika tsara sy rafitra anatiny milamina, izay mora alefa rehefa mandalo ny tariby sy ny tariby.
7. Ny hosotra mifono plastika dia tantera-drano, tsy misy menaka, porofon'ny harafesina ary mahomby amin'ny famehezana. Mahafinaritra ny vokatra ary matevina ny firafiny.
Fampiharana ny fantsom-by vy nandrisika
Ampiasaina amin'ny fiarovana ny tariby sy ny fitaovana elektrika amin'ny tariby fampitaovana mazava tsara, herinaratra, tariby, plastika, fingotra ary indostria hafa. Azo ampiasaina amin'ny fantsom-pamantarana famantarana mandeha ho azy sy fantsom-piarovana fiarovana tariby mandeha ho azy; ampiasaina amin'ny boribory mpitondra optika marina, sensor indostrialy, fantsom-piarovana fiarovana elektronika; fiarovana fiarovana faribolana elektrika, fiarovana capillary fitaovana mafana ary tariby optique malefaka avo làlan'ny hollow Ny tohana dia hampiasa vy mifono vy mifono vy.
Previous: Fitaovana metaly miaraka amin'ny sheathing puv pu
Manaraka: Làlan-by amin'ny alàlan'ny PVC
Fitaovana metaly tariby malefaka
Fantsom-by vy mandeha amin'ny herinaratra malefaka
Fifanarahana fitaterana vy azo ovaina
Fitaovana fantsom-by metaly mora azo
JS karazana fantsona metaly nandrisika